Ọrụ Ntugharị Dallas - Ibe Ụlọ
ỌRỌ NKWUKWU DALLAS
Ọrụ Asụsụ Amerịka (AML-Global) enyela ọrụ ntụgharị ederede kachasị n'usoro n'ofe ụlọ ọrụ dị iche iche n'ihe karịrị asụsụ 150 maka ihe karịrị afọ 25. Azụmaahịa Dallas na -ejikarị ọrụ idegharị akwụkwọ, ndị ọrụ ntụgharị asụsụ Asụsụ America na -akwadokwa ka ha nwee ike ijikwa mkpa transcript na obodo dịka Dallas. Enwere nnukwu agbụrụ na asụsụ dị iche iche na Dallas 'ndị bi ebe a na-asụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 asụsụ dị iche iche. Anyị na -edepụta asụsụ dị iche iche, enwere ike ịmepụta ndekọ anyị site na ndekọ ọdịyo echekwara na obere kaseti, teepu, VHS, CD, DVD, cassettes ọdịyo, cassettes micro na faịlụ dijitalụ, gụnyere DAT, MP3, MPEG na RA.
A na -ekpebi ọnụahịa ntụgharị asụsụ anyị site na njikọta asụsụ ejiri, ọnụọgụ ndị na -ekwu okwu, oge ngwụcha na ogo ọdịyo. Ọnụ ahịa ga-adịgasị iche dabere na usoro njedebe masịrị.
Iji mee ngwa ngwa kwuo okwu, AML-Global na-eji teknụzụ teknụzụ iji nyefee faịlụ ọdịyo. Anyị nwere saịtị Nyefee Protocol (FTP) dị maka faịlụ eletrọnịkị buru oke ibu maka ọtụtụ sistemụ email ọkọlọtọ. Ndị na-edegharị asụsụ ọtụtụ asụsụ a zụrụ nke ọma na teknụzụ anyị dị elu na-enye anyị ohere ịzaghachi ngwa ngwa na arịrịọ gị, nke ahụ na-emekwa ka oge ntụgharị dị ukwuu.
Ndị na-edegharị akwụkwọ anyị na Dallas na-ede n'ihe karịrị asụsụ 150. Mee ka ndị ọrụ anyị nwere nkà na enyi na-enyere gị aka ịnweta ndegharị nke ịchọrọ, ngwa ngwa na ọnụ ahịa nke ọma. Kpọọ anyị na 1-800-951-5020.
N'ime asụsụ anyị na -edegharị ugboro ugboro bụ:
Enyere Ọrụ Ndị Ọzọ:
Ọrụ ntụgharị asụsụ Dallas
Ọnọdụ ụlọ ọrụ Dallas
Ekwentị: (972) 730-7260